Residential Use CS-PN12WKH-7 - Panasonic
24 နာရီပတ်လုံး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လေ
Panasonic ၏ Standard Non-Inverter က ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် မြန်ဆန်အားကောင်းသော အအေးပေးခြင်းကို ခံစားနိုင်စေပြီး ဖလပ်ပြားအကြီးက အေးမြသောလေကို အခန်းတစ်ခုလုံးအနှံ့ ညီညီညာညာ ပျံ့နှံ့စေရန် လေစီးကြောင်းကို ပို၍ဝေးဝေးရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးပြီး သင့်ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။
အားကောင်းသော စနစ်သည် သင့်အခန်းကို 18%* ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အေးမြစေပြီး စဖွင့်ချိန်အတွင်း ချက်ချင်း အားကောင်းသော အေးမြမှုကို ခံစားရစေရန် သင့်အတွက် ကွန်ပရက်ဆာနှင့် အတွင်းပန်ကာနှစ်ခုလုံးကို အလွန်မြန်ဆန်သောအရှိန်ဖြင့် လည်ပတ်ပေးသည်။
*1.5HP အင်ဗာတာ အမျိုးအစားကို သုံးပြီး စွမ်းအားမြင့် အအေးမုဒ်နှင့် ပုံမှန် အအေးမုဒ်ကို နှိုင်းယှဉ်ချက်။
ပန်ကာဒလက်ကြီးများဖြင့် ကြာရှည် လေမှုတ်ပေးနိုင်စွမ်း
အောက်ပိုင်းရှိ ပန်ကာဒလက်ကြီးက အခန်းထဲတွင် အေးစိမ့်နေစေရန် အေးမြပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိသည့်လေကို တစ်ခန်းလုံးသို့ ဖြန့်ကြက်ပေးသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော R32 အအေးပေးပစ္စည်း
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့် R32 အအေးပေးပစ္စည်းကို Panasonic လေအေးပေးစက်များတွင် ပို၍ ပို၍ အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ စွမ်းအင် အကျိုးရှိရှိ သုံးစွဲပြီး ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေရန် အထူးကောင်းမွန်သော အပူလွှဲပြောင်းမှု ကြားခံ။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာနိုင်ခြေလည်း နည်းပါးစေသည့်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပို၍သဟဇာတဖြစ်သည်။
Big bottom flap helps direct cool air across the room
Eco-friendly R32 refrigerant provides greater energy and cost-effectiveness at low environmental impact
အချက်အားလုံးကို ကြည့်ရန်အချက်အားလုံးကို ပိတ်ရန်
11.5 m³/min (406 ft³/min)
29.0-29.9 m³/min (1,020-1,060 ft³/min)
Indoor (H / L)
50 - 51 dB(A)
542 mm (21-11/32 inch)
780 mm (30-23/32 inch)
289 mm (11-13/32 inch)
Automatic Operation Mode (Cooling)
24-Hour ON & OFF Real Setting Timer
Top-Panel Maintenance Access
*When pipes are not extended from the chargeless pipe length, the required amount of refrigerant is already in the unit.
Please read the Installation Instructions carefully before installing the unit, and the Operating Instructions before using it. Specifications are subject to change without prior notice.
ပရင့်ထုတ်ရန် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖွင့်ပါ
အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) ထဲ ပေါင်းထည့်ရန် အလိုရှိသည်များ စာရင်း (Wish List) မှ ဖယ်ရှားရန်
Copyright © 2021 Panasonic Myanmar